HP က P2055 များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Revo Uninstaller - သင်ထိရောက်စွာမလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များအနေဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးနိုငျသောအတူ program တစ်ခု။ ၎င်း၏ပိုင်ထိုက်သောကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ပေါ်တွင် program ကိုအသုံးပြုသူရဲ့ဖိုင်တွဲကနေဖိုင်တွေနဲ့အခြားဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ပစ်လို့ရပါတယ်။
Revo Uninstaller အခွင့်အလမ်းများကိုမျှသာအစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းမှကန့်သတ်မရှိကြပေ။ ဒီ tool နှင့်အတူသင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလှည့်သောအခါ autorun အစီအစဉ်များကို configure, မလိုအပ်တဲ့ system files ကိုဖယ်ရှား, ယာယီဖိုင်တွေထဲကဖိုင်တွဲကို browser နှင့်အခြား application များသန့်ရှင်းရေးနိုင်ပါတယ်။ ကအထိရောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသူကိုသူမကြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့သည် Revo Uninstaller ၏ Pro ကို-version ကိုလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဤအစီအစဉ်၏အသုံးပြုမှုအတွက်အဓိကအချက်များစဉ်းစားပါ။
Revo Uninstaller ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
Revo Uninstaller သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
1. ပထမဦးစွာပြုစု၏တရားဝင် site မှပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပါ။ ဤသည်အခမဲ့အဘို့ပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်း 30 အပြည့်အဝဗားရှင်းကိုဝယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ 2. ခြံထွက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်း။
Revo Uninstaller သာအုပ်ချုပ်သူအကောင့်နဲ့သို့မဟုတျသူ၏ကိုယ်စားအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
3. program ကို run လိုက်ပါ။ ငါတို့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့ features တွေနှင့်အတူမီနူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုအရေးအပါဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။
Revo Uninstaller သုံးပြီး program ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Revo Uninstaller မှတဆင့်အစီအစဉ်များကို uninstall လုပ် Windows တွင်စံဖယ်ရှားရန်အစီအစဉ်များကို အသုံးပြု. အလားတူဖြစ်စဉ်ကိုကနေအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အသေးစိတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
1. Go ကိုနဲ့ tab "Uninstall ကို" ရန်နှင့်သင်ဖျက်ပစ်ချင်သောအစီအစဉ်များ၏စာရင်းထဲတွင်ရွေးချယ်ပါ။
2. ကိုနှိပ်ပြီးခလုတ် "ကိုဖျက်ပစ်ရန်" ။ ထို့နောကျထိုလုပ်ငန်းစဉ်ဖယ်ရှားရန်အစီအစဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်လွှာမှာ, ကွဲပြားခြားနားသောကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ မှတ်ချက် jackdaws ပြီးညွန်ပြနောက်သို့လိုက်အလိုရှိသော။ ဖယ်ရှားရေးပြီးစီးပေါ်၌ Uninstall အလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အောင်မြင်သောပြီးစီးသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။
3. ယခုအခါပျော်စရာအစိတ်အပိုင်း။ Revo Uninstaller ဝေးလံခေါင်ဖျားအစီအစဉ်မှကျော် left ဖိုင်တွေအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ကမ်းလှမ်း။ scanning သုံးခုသည် Modes ထဲကယူသွားနိုင်ပါသည် - "ကို Safe" "အလယ်အလတ်" နှင့် "အဆင့်မြင့်" ။ ရိုးရှင်းအစီအစဉ်များအတွက်တရားမျှတစွာအလယ်အလတ်စစ်အစိုးရကဖြစ်လိမ့်မည်။ ခလုတ်ကို "Scan ကို" Push ။
4. Scanning ကိုပြတင်းပေါက်သောဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့အတူ directory ကိုထင်ဟပ်ပေါ်လာသောအရာသည်နောက်, တချို့အချိန်ကြာပါတယ်။ "အားလုံးကို Select လုပ်ပါ" နှင့် "ဖျက်ပစ်ပါ" ကိုနှိပ်ပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလက်စသတ်နေသည်ဖယ်ရှားခြင်း၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်!
ဖယ်ရှားရေးပြတင်းပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်ပြီးနောက် 5. အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကမ်းလှမ်းသောအခြားဖိုင်များနှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဂရုတစိုက်စာရင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဖျက်ခံရဖို့အစီအစဉ် related သာဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ သငျသညျသေချာမသိကြပါလျှင်, ပဲဘာမှကိုမဖျက်ပစ်မရှိဘဲဤခြေလှမ်း skip ။ "Finish ကို။ " ကိုနှိပ်ပါ
Revo Uninstaller သုံးပြီး browser ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအသုံးပြုသူရဲ့ browser ကို, သင့် hard disk ပေါ်မှအာကာသယူထားသောအရာမလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောပမာဏ, စုပုံနိုင်သည်။ နေရာလွတ်မှအောက်ပါ sequence ကိုလိုက်နာ။
1. Open ကို Revo Uninstaller, အ tab ကိုသွားပါ "Browser ကို Cleaner ။ "
2. ထိုအခါကလိုချင်သော browser မှာ brushed သင့်ကြောင်းအဆိုပါ jackdaws သတိပြုပါ, ကိုနှိပ်ပါ "Clear ကို။ "
browser ကိုရှင်းလင်းရေး, ဒီအများအပြားဆိုဒ်များပြီးနောက် re-ဝင်အသုံးပြုသူအမည်များနှင့် passwords ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။
registry ကိုနဲ့ Hard drive ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း
1. "Cleaner ကို Windows » tab ကိုသွားပါ။
သည် "Registry မှာခြေရာများ" ၏စာရင်းများတွင် jackdaws ၏ရက်စွဲများနှင့်သတိပြုပါ, ပေါ်လာပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင် 2. "ဟုအဆိုပါ hard drive ပေါ်တွင်ခြေရာများ။ " ဒီ window ထဲမှာသင် recycle bin ကိုရွေးနိုင်သည်နှင့် Windows ပေါ်မှာယာယီဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ပါမည်။
3. ကိုနှိပ်ပြီး "Clear ကို"
ငါအလိုအလြောကျ Revo Uninstaller ၏အကူအညီဖြင့် run ဖို့အစီအစဉ်ကိုဘယ်လို configure ပါဘူး
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လှည့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသူတို့အား applications များ assign ပါလိမ့်မယ်။
1. တစ်ဦး tab ကို "Startup Manager ကို" ကို run, Revo Uninstaller ဖွင့်လှစ်
program ကိုအလိုအလျှောက်စတင်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကအနားမှာတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားပါဝင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုခင်မှာ 2. အစီအစဉ်များစာရင်းဖြစ်သည်။
3. သင် "Add" လာမယ့် window ထဲတွင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတွေ့ပါ "Browse ကို" ကိုနှိပ်, အလိုရှိသောအစီအစဉ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်
4. အဆိုပါအစီအစဉ်စာရင်းထဲမှာထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်, ထို့နောက်ရုံ autorun ကို enable ဘေးမှာက checkbox ကိုဖွင့်။
ကျနော်တို့ Revo Uninstaller အသုံးပြုခြင်း၏အခြေခံဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ဒီပရိုဂရမ် - ရုံတစ်ခုဖယ်ရှားမှုကိုထက်ပို။ ဒါဟာသင်ပိုမိုထိရောက်စွာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖြစ်စဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်၌စောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီဖို့မည်!